Nkwụghachi ụgwọ - Ụmụ nwoke hụrụ n'anya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Backkwụghachi nkezi 4.4 / 5 si 16
NA / A, o nwere ihe nlere 28.1K
Yoohan, bụ onye banyere azụmahịa ịgbazinye ego na afọ ebe onye ọ bụla gbara ya gburugburu na-anwale ule dị mkpa maka ọrụ ha n'ọdịnihu, na-ebi ndụ dị ka onye na-abaghị uru ebe ọ na-agagharị na-eyi egwu na iji ime ihe ike na-adọpụ ego dịka akụkụ nke ọrụ ya. Otu ụbọchị, otu onye na-ebuso ya agha nwụnahụrụ ezinụlọ ya. N'ịbụ onye obi amamikpe na ezinụlọ ya nwụrụ n'ihi ya, ọ na-ebi ndụ enweghị izu ike nke na-enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị ịrụsi ọrụ ike na ọchịchọ nke ikpuchi mmehie ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, na ndabara, ọ matara maka eziokwu ahụ na onye ya na ya bi n'oge ochie, Song Myeong-sin, keere òkè n'ọnwụ nwanne ya nwoke, ma kpebie ịbọ ọbọ megide ya.
Yoohan nke mere mkpebi dị otú ahụ batara na otu nwoke na-ekwu na ya ga-enyere ya aka….
Ị nwere ike ịhụ ebe a, ụwa nke yaoi smut, gifs yaoi